कोरोनाबाट कसरी बच्यो ताइवान ? | Pennepal
Home अन्तराष्ट्रिय कोरोनाबाट कसरी बच्यो ताइवान ?
एजेन्सी । चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरानो भाइरस (कोभिड –१९) अहिलेसम्म संसारका १ सय ३२ देशमा पुगिसकेको छ । चीनपछि इटाली र इरानमा यो भाइरसबाट सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् ।
तर एउटा ठूलो प्रश्न छ ताइवानले के गर्यो र सीमा जोडिएको चीनको महामारीबाट ऊ कसरी जोगियो ? चीनमा मर्ने र संक्रमण हुनेको संख्या लगातार बढी रहँदा तानवानमा भने रोक्न सफल भएको छ । डोएचेवलको रिपोर्टअनुसार चीनमा संक्रमितको संख्या वढदै गर्दा ताइवानले तत्काल सेना उतार्यो र स्प्रे गर्न लगायो । विद्यालयमा सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्यो ।
संसारमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या लाखौं पुग्दा ताइवानमा अहिलेसम्म ५० जनामा मात्र संक्रमण देखिएको र त्यो पनि सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ । अहिले संसारका सबैजसो देशले यो थाहा पाउन कोशिस गरिरहेका छन्, चीनसंग जोडिएको ताइवान आखिर कसरी यो भाइरस संक्रमण रोक्न सफल भयो ? ताइवानले के गर्यो जसले कोरोना संक्रमण फैलन दिएन र अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको खबर आएको छैन ?
जानकारहरू चीनपछि ताइवाननै यसको अत्याधिक शिकार हुने अड्कल लगाउथें । जनवरीमा चीनमा कोरोना भारुरसको संक्रमण सुरु भएको थियो, त्यतिबेला अडकल लगाइन्थ्यो की चीनसंग जोडिएका सबै सहर यसका शिकार हुनेछन् र त्यहाँ मर्नेको संख्या पनि अत्याधिक हुनेछ भनेर । चीनपछि ताइवान यसको शिकार हुने धेरैको अनुमान थियो, तर चीनमा ८० हजारभन्दा बढीमा यसको संक्रमण देखिदा ताइवानमा ५० जनामाभन्दा बढन सकेन । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारका अनुसार ताइवानले जुन स्फुर्तिले यसको विरुद्ध कदम चाल्यो त्यसैको परिणाम हो ।
अमेरिकाकी स्टैनफार्ड युनिभर्सिटीका डाक्टर जेसन वैगकाअनुसार ताइवानले धेरै छिटो परिस्थितिको गम्भिरतालाई पहिचान गर्यो । सन् २००२÷२००३मा सार्स एपिडेमिक पछि ताइवानले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुगन केन्द्रको स्थापना गरेको छ । ताइवानले महसुश गरिसकेको थियोकि कोराना आगामी महामारी हुनेछ । यसलाई मध्येनजर पहिल्यैदेखि तयारी गरेको थियो ।
चीनमा कोरोना भाइरस पीडितको संख्यामा वृद्धि हुनासाथ ताइवानले चीन, मकाउ र हङकङ जान प्रतिवन्धनै लगायो । यतिमात्र होइन उसले तत्काल सर्जिकल मास्क निर्यातमा प्रतिवन्धनै लगायो, जसले मास्कको अभाव हुन दिएन । वैगभन्छन् उसले आफ्नो संसाधनलाई सोचविचार गरेर प्रयोग गर्यो । ताइवान सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षण, अध्यागमन र भन्सारबाट तथ्यांक संकलन गर्यो र मानिसको ट्र्याभल हिस्ट्रिसंग मिलन गरेर स्वास्थ्य अधिकारले पत्ता लगाउन सफलकी कतिलाई संक्रमण भएको छ भनेर, अनि त्यसैअनुसार उपायको खोजी गर्दै गए ।
यसबाहेक ताइवानले यस्ता केही एप पनि बनायो, जसकोमार्फत मानिस देशमा प्रवेश गर्नासाथ क्यूआर कोडको स्क्यान गरेर आफ्नो लक्षण र यात्राको जानकारी दिन सकुन । यसपछि फोनमा म्यासेज पठाइन्थ्यो जसलाई उनीहरूले अध्यागमन अधिकारीलाई देखाउथें । अधिकारीहरू यसैलाई हेरेर पत्ता लगाउथें की कसलाई प्रवेश गर्न दिने हो र कसमाथि नजर राख्ने हो भनेर ।
केही प्रविधिको सहायताले केही संवेदनशिलताले ताइवानले यसलाई रोक्न सफल रह्यो । तर ताइवानी जनताले आफ्नो सरकारको हरेक आदेशलाई मानेर गरेको सहयोगलाई पनि मान्नु पर्दछ । आफूलाई शंका हुँदाहुँदै कसैले पनि सार्वजनिक स्थानमा गएर अरुलाई प्रभावित पार्ने काम गरेनन् ।
सार्स फैलदा ताइवानीहरूले धेरै सास्ती खेप्नु परेको थियो । यो दुःख उनीहरूको दिमागमा ताजै थियो, यसले सामाजिक एकताको महसुश गरायो । उनीहरुले बुझेकी यो समस्यामा सबैको साझा हो र सरकारको आदेश खुरुखुरु मान्नुमानै सबैको भलाई छ । यसकै परिणाम ताइवान उच्च जोखिममा हुँदाहुँदै कोरोना भाइरस रोक्न सफल रह्यो ।